भर्खरै आयो सलमान र उनको फ्यानहरुको लागि अत्यन्तै दुखद खबर , सलमान परे यस्तो सुचिमा ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > भर्खरै आयो सलमान र उनको फ्यानहरुको लागि अत्यन्तै दुखद खबर , सलमान परे यस्तो सुचिमा !
मुम्बइ। बलिउड अभिनेता सलमान खान अब अपराधीको रुपमा दर्ता भएका छन् । उनको नाम अपराधीको सूचीमा दर्ता नम्बर ३९ मा दर्ता भएको छ ।यो सूचीमा ती अपराधीहरु छन् जो संरक्षित जनावरको शिकार, तस्करी वा यस्तै अपराधमा लिप्त पाइएका छन् । भारतको वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रोल ब्यूरोले सलमानलाई अपराधीको रुपमा सूचीकृत गरेको हो । सलमानलाई राजस्थानको जोधपुर
अदालतले कालो हरिणको शिकार अभियोगमा ५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो ।पर्यावरण र वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहने यो ब्यूरोले सेप्टेम्बर २००८ देखि काम सुरु गरेको हो । ब्यूरोले निकै सुस्त गतिमा काम गरिरहेको भारतीय संचारमाध्यमले आरोप लगाएका छन् किनकि १० वर्षमा ब्यूरोले मात्रै ३९ अपराधीलाई सजाय दिलाएको छ ।
ब्यूरोका ३९ अपराधीमध्ये सबैभन्दा धेरै १५ अपराधी बाघको शिकारसँग सम्बन्धित छन् । सलमान भने हरिण शिकारका एक्ला अपराधी हुन् ।
फेरि सँक्रमित बढेसँगै भरिदै टेकु अस्पताल, खतरा बढेपछि प्रशासनले जारी गर्यो यस्तो सूचना